देश को राष्ट्रप्रमुख बन्न सुहाउने ब्याक्तित्व हिमानी शाह मनपरे लाइक र सेयर गर्नुहोस्। «
देश को राष्ट्रप्रमुख बन्न सुहाउने ब्याक्तित्व हिमानी शाह मनपरे लाइक र सेयर गर्नुहोस्।
Published : 14 February, 2020 11:48 am
पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहको जन्म १ अक्टोबर, १९७६ मा भारतको राजस्थान सिकरमा भएको हो। हिमानी भारतको राजस्थानको सिकरका पूर्व सूर्यबंशी राजकूलका राजा बिक्रम सिंह र रानी बिपुला सिंहको कोखबाट जन्नम लिएकी हुन्।
हिमानीको सन् २००० मा पूर्वयुवराज पारससँग बिहे भएको थियो। उनले छोरा हृदयेन्द्र शाह, र छोरीहरू पूर्णिका शाह, एवं कृतिका शाहलाई जन्न दिएकी हुन्। उनले प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई सहयोग गर्न दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ स्थापना गरेकी छिन्। ट्रष्टकी अध्यक्ष समेत रहेकी उनि ४४ वर्ष लाग्दा पनि उतिकै सुन्दर देखिएकी छिन्।
त्यस्तै पछिल्लो समय मोडल तथा युट्युबर सोनिका रोकायासँगको हिमचिमका कारण चर्चामा आएका पूर्वयुवराज पारस शाहले आफू राजा हुने आशक्तिको मानिस नभएको बताएका छन्।
पूर्व युवराज पारसले हरेक काम गर्न आफू स्वतन्त्र भएको बताए। रोकायासँग हिमचिम बढेको र उनलाई लिएर मोटरसाइकलमा हुँइकिएको भिडियो बारे पारसले प्रश्न गरे, म राजा हुँ र मोटरसाइकलमा हिँड्दा लाज मान्नुपर्ने’ ?
पूर्व युवराजको जीवनशैली र व्यवहारबारे आलोचना भइरहेको बेला पारसले भने आफूलाई त्यस्ता कुराले कुनै प्रभाव नपर्ने बताए। जसले जे सुकै भनोस् म खुला मान्छे हुँ र त्यही चाहन्छु, पारसले भने, लुकाउन के जरुरी छ र।
पासरले अहिले आफू अध्ययनमा केन्द्रित रहेको बताए। पूर्वीय दर्शनको अध्ययनमा आफू लागेको पारसको भनाइ छ। म अहिले पूर्वीय दर्शनको अध्ययनमा छु’ पारसले भने, म हिजको जस्तो होइन, अब कुनै गल्ती हुँदैन।
केही दिनयता पूर्वयुवराज पारस शाह र सोनिकाबीचको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। पोखरामा खिचिएको भनिएको भिडियोमा पारस बाइकमा बसेका छन्।
उनले देशमा कुनै वादी नभएको र आफूलाई राजवादी नभन्न भनेको भिडियोमा सुन्न सकिन्छ। यसो भनिरहँदा पारसको मोटरसाइकलको पछाडि सोनिका आएर बस्छिन् र पासरले बाइक हुइँकाउँछन्।
उक्त भिडियो एकाएक भाइरल भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा पारस ट्रोल भइरहेका छन्। पारस ट्रोलको शिकार बन्नुको पछाडि उनका यस अघिका हर्कत हुन्। उनी थाइल्याण्डमा रहँदा थाइ महिलासँग जोडिएका थिए भने नेपालमा पनि उनका विभिन्न का’ण्डहरु सार्वजनिक भएका थिए।
पछिल्लो चरण सोनिकासँगको प्रकरण बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले उनलाई ट्रोल गरिरहेका हुन्। सोनिकाले भने आफू र पारस तीन महिनादेखि नजिक रहेको प्रतिक्रिया स्वीकारेकी छिन्। खबरहबसँगको कुराकानीमा सोनिकाले पारस र आफ्नो सम्बन्ध एक अभिभावक जस्तै भएको प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।
यता पारसले भने मलाई राजा बन्नु छैन, मोटरसाइकलमा हिँड्दा के को लाज’? म राजा बन्दिनँ, अब साधु बन्छु’ भन्दै जोगी जीवन बिताएको दाबी गरिरहेका छन्। पारसको यसकिसिमको उदण्ड शैलीप्रति उनीहरु आजित बनेका हुन्।
उनीहरु चिन्तित पनि त्यत्तिकै छन्। सन्ततिहरुले पारसको यस किसिमको पाठ नसिकुन् भनेर छोराछोरीलाई अलग राखिएको स्रोतले जनाएको छ।
पूर्व राजपरिवारमा पारसलाई हृदयन्द्रबाट टाढा राखिएको छ। पारसको बानीकै कारण लामो समयदेखि पत्नी हिमानी पनि टाढा छिन्। हिमानी समाजसेवामा सक्रिय छिन्। उनको समाजमा लोकप्रियता बढ्दो छ। हिमानीले छोरा हृदयन्द्रलाई साथमा लिएर परोपकारी काम सिकाइरहेकी छिन्।
कुन बारमा कुन देवी-देवताको पूजा गर्ने ?, हप्ताको हरेक बारलाई देवी-देवताको बार मानिने गरिन्छ।
हिन्दु धर्ममा, हप्ताको हरेक बारलाई देवी-देवताको बार मानिने गरिन्छ। विशेष व्रत र उपवास बाहेक, अधिकांश